अमेरिकामा १९ खर्ब डलरको कोरोना राहत प्याकेज पारित : बाइडेन - नेपालबहस
अमेरिकामा १९ खर्ब डलरको कोरोना राहत प्याकेज पारित : बाइडेन
| १२:०३:२२ मा प्रकाशित
२७ फागुन, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले पनि राष्ट्रपति जो बाइडेनको १९ खर्ब डलरको कोरोना राहत प्याकेजलाई पारित गरेको छ।
बुधबार भएको मतदानमा राहत प्याकेजका पक्षमा २२० र विपक्षमा २११ मत परेको थियो। संसदका दुबै सदनबाट आफ्नो प्रस्ताव पारित भएपछि राष्ट्रपति बाइडेनले ट्वीटरमा लेखेका छन्- हेल्प इज हियर !
उनले पारित भएको विधेयकमा शुक्रबार हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ। यसअघि गत शनिबार माथिल्लो सदन सिनेटबाट राहत प्याकेज पारित भएको थियो। प्याकेजका पक्षमा ५० र विपक्षमा ४९ मत परेको थियो। जनवरी २० मा पदभार सम्हालेपछि राष्ट्रपति बाइडेनले पहिलो पटक दुबै सदनबाट आफ्नो प्रस्ताव पारित गराएका छन्।
यो राहत प्याकेजअन्तर्गत सरकारले रोजगारविहीन अमेरिकीहरूको खातामा साताको ३ सय डलरदेखि महिनाको १४ सय डलरसम्म रकम जम्मा गरिदिने छ। यसबाट कोरोनाभाइरसले शिथिल भएको अमेरिकी अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि गत वर्ष पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर २० खर्ब डलरको राहत प्याकेज ल्याएका थिए। कोरोना भाइरसले अमेरिकामा अहिलेसम्म ५ लाख २० हजार बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। गत वर्ष अमेरिकाको अर्थतन्त्र ३.५ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो।
नेपालगञ्जमा शुक्रबारदेखि शैक्षिक संस्था बन्द हुने ७ घण्टा पहिले
महंगो बजेटमा मुकुन्दको एक्स ९–लेभल १ १० घण्टा पहिले
राष्ट्रिय खाद्य बैंकको केन्द्रिय कार्यालय आजबाट शुभारम्भ १३ घण्टा पहिले
स्थितिलाई दृष्टिगत गरी सुरक्षितरुपमा नयाँ वर्ष मनाउन देउवाको आग्रह २ दिन पहिले
लहलहाउँदो गहुँबाली देख्दा यादव हर्षित ४ हप्ता पहिले
चीनका युवा राति ११ बजेपछि मात्रै सुत्छन् ४ हप्ता पहिले
अवैध कमिटीले सोधेको स्ष्टीकरण दिइन्नः रावल ४ हप्ता पहिले
देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा नाम्खामा भने नियमित पठनपाठन २ हप्ता पहिले
दुई दिनभित्रै नयाँ प्रोटोकल जारी हुन्छ, सीमा खुल्छ ! ४ हप्ता पहिले
युट्युबको टिकटक अमेरिकामा सुरु ४ हप्ता पहिले
प्रतिनिधिसभा बैठक : पूर्वसांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव गर्नमै सीमित ४ हप्ता पहिले
झापामा लागुऔषधको जालो च्यात्ने प्रयास, १४८ जना कारागार चलान ३ महिना पहिले
प्राप्त उपलब्धिहरु नै गुम्ने खतरा : उपराष्ट्रपति १ वर्ष पहिले
ओलीले प्रस्‍तुत गरे तीन वर्षे उपलब्धि [ पूर्णपाठसहित ] २ महिना पहिले